कुन बार जन्मिएका र कुन राशीका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? - ज्ञानविज्ञान
यी हुन तपाई चाँडै धनी बन्ने र भाग्य बदलिने सकेंतहरु
लक्ष्मीले कुन बेला र कसरी तपाईहामीमा कृपा गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । जे गर्दा पनि सफल नँहुदा जो कोही पनि निराशाको शिकार बन्नु स्वभाविक हो।
शास्त्रका अनुसार यस्ता सकेंतहरु छन् जसले तपाइको जीवनमा लक्ष्मीको प्रवेश र भाग्या चम्कीदै छ भन्ने सकेंत गर्दछ । केहि यस्ता सकेंत छन् जसले तपाईलाई भाग्य चम्कीन लागेको सकेंत गर्दछ ।
जानीराखौ यस्ता सकेंतहरु के–के हुन् ।
Don't Miss it के तपाईहरु पनि फेसनको नाममा च्यातिएका कपडा त लगाउने गर्नु भएको छैन ? असुभ हुन सक्छ
Up Next कसरी आउँछ डण्डिफोर ? डण्डिफोर निचार्नु उचित कि अनुचित ?